cds and clearing(cds and clearing) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
‘मेरो सेयर’ लिनेको संख्या ३८ लाख नाघ्यो, डिम्याट खोल्ने कति ?
काठमाण्डौ। पछिल्लो समय सेयर बजारमा आकर्षण बढ्दै जाँदा सीडीएससीको ‘मेरो सेयर’ लिनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। अहिले पुँजीबजारमा देश तथा विदेशबाट लगानी गर्नेको संख्या बढ्दो रहेको छ। सीडीएससीको तथ्यांकअनुसार आजसम्म ‘मेरो सेयर’ लिनेको संख्या ३८ लाख ५२१ पुगेको छ। डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या पनि बढेर ४६ लाख ८६ हजार ६७२ ...
मेरो सेयरमा किन बारम्बार देखिन्छ ‘ईडीआईएस’ नहुने समस्या ? यसो भन्छन् सीडीएससी र नेप्से
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सीडीएससीको ‘मेरो सेयर’ मा ईडीआईएस नहुने समस्या पटकपटक देखिन थालेपछि लगानीकर्ताहरु हैरान भएका छन्। आफूले बेचेको सेयर हस्तान्तरण गर्न ईडीआईएस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ईडीआईएस नै नहुने समस्या पटकपटक देखिन थालेपछि लगानीकर्ताहरु मेरो सेयर प्रणालीप्रति सशंकित हुन थालेका छन्। सीडीएससीले मेरो सेयरको...
आउँदो आइतबारबाट प्रयोगकर्ता आफैँले ‘मेरो सेयर’ को पासवर्ड बिर्सेमा रिसेट गर्न सक्ने
काठमाण्डौ । आउँदो आइतबारबाट मेरो सेयरमा प्रयोगकर्ता आफैँले पासवर्ड बिर्सेमा रिसेट गर्न पाउने भएका छन्। मेरो सेयरमा क्षमता थपेर सुधार गरेको सीडीएससीले यो सुविधा प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउन लागेको हो। आउँदो आइतबारको बेलुकासम्म प्रयोगकर्ताले मेरो सेयरमा पासवर्ड बिर्सेमा आफैँले रिसेट गर्न सक्ने सीडीएससीका सीईओ पूर्णप्रसाद आचार्यले...
मेरो सेयरमा समस्या, मैलुङ खोला जलविद्युतको आईपीओमा आवेदन दिने समय थपिने
काठमाण्डौ । मेरो सेयरमा समस्या आएपछि आज दिउँसोबाट मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा आवेदन कार्य अवरुद्ध बन्न पुगेको छ। सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सरकारको एकीकृत तथ्यांक केन्द्र विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउँदा अवरुद्ध बनेका कारण सीडीएससीका सर्भर तथा उपकरणहरु बन्द हुन पुगेको हो। ‘जसका कारण दिउँसो साढे ३...
यसकारण भएन आज मेरो सेयरमा पोर्टफोलियो परिवर्तन, अझै कति समय लाग्ला ?
काठमाण्डौ । आज सेयर बजारले उच्च विन्दु चुम्दा पक्कै पनि आफ्नो पोर्टफोलियो कति बढ्यो भनेर हेर्न मन लाग्छ। तर सेयर बजार बढे पनि आफ्नो पोर्टफोलियोमा कुनै परिवर्तन नआएको देख्दा अचम्म पनि लाग्न सक्छ। तर किन अपडेट भएन पोर्टफोलियो ? कारण यस्तो रहेको छ। सीडीएससीका अनुसार नेप्सेले आजको एपीआईको डाटा नपठाउँदा मेरो सेयरमा पोर्टफोलियो...
मेरो सेयरमा ‘ईडीआईएस’ नहुँदा लगानीकर्ता हैरान, यस्तो रहेछ समस्याको कारण
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । बेलैमा ईडीआईएस नहुँदा क्लोजआउटमा पर्ने समस्यासम्बन्धी लगानीकर्ताको गुनासाहरु निकै सुनिने गरिन्छ। अझ समयमै ईडीआईएस नगर्दा वा मेरो सेयरमा आएको समस्याले ईडीआईएस गर्न नपाएर जरिवाना तिर्ने लगानीकर्ता थुप्रै छन्। मेरो सेयरमा आज बिहानैदेखि फेरि ईडीआईएसमा समस्या देखिँदा लगानीकर्ता समस्यामा परेका...
अब ‘मेरो सेयर’ को पासवर्ड बिर्सेमा आफैँले रिसेट गर्न सकिने
– अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । सिस्टमलाई अपडेट र अपग्रेड गर्दै गएको सीडीएससीले ‘मेरो सेयर’ मा अब पासवर्ड बिर्सेमा प्रयोगकर्ता आफैँले रिसेट गर्न सक्ने सुविधा थप गर्न लागेको छ। सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पूर्णप्रसाद आचार्यले अब ‘मेरो सेयर’ को पासवर्ड बिर्सेमा प्रयोगकर्ता आफैँले सजिलै रिसेट गर्न सक्ने सुविधा...
‘मेरो सेयर’ मा फेरि समस्या, सीडीएससी भन्छ, ‘समाधानको प्रयास जारी छ’
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा दैनिक उच्च कारोबार हुन थालेसँगै सीडीएससीको ‘मेरो सेयर’ पोर्टलमा फेरि समस्या देखिन थालेपछि लगानीकर्ताहरु हैरान भएका छन्। ‘मेरो सेयर’ सेयर ट्रान्सफर र डब्ल्यूएसीसी गर्न समस्या भइरहेको छ। हिजैबाट मेरो सेयर यी समस्या देखिएका कारण निकै समस्या भइरहेको लगानीकर्ता जितेन्द्र क्षेत्री बताउँछन्। ब्रोकर...
सीडीएससीले सुरु गर्यो ‘मेरो सेयर’ स्तरोन्नतिको काम, सेवाग्राहीलाई धैर्य गर्न आग्रह
काठमाण्डौ । सीडीएस एन्ड क्लिरियङ (सीडीएस) ले ‘मेरो सेयर’ पोर्टल स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको छ। सीडीएससीले एक सूचना जारी गर्दै मेरो सेयर स्तरोन्नतिको काम भइरहेको जानकारी गराएको छ। स्तरोन्नतिको काम केही दिनसम्म जारी रहने र यो अवधिमा समयसमयमा मेरो सेयर नुखल्ने वा लग आउट हुनेजस्ता समस्या देखिने पनि सीडीएससीले स्पष्ट पारेको...
‘मेरो सेयर’ आज राति ८ बजेबाट नचल्ने, ईडीआईएस गर्ने समय थप
काठमाण्डौ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) को ‘मेरो सेयर’ पोर्टल प्राविधिक समस्या आएपछि केही समयका लागि अवरुद्ध हुने भएको छ। सीडीएससीले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै आज राति ८ बजेदेखि केही समयका लागि मेरो सेयर अवरुद्ध हुने जानकारी गराएको हो। मेरो सेयरमा सेवाग्राहीको चाप बढ्ने क्रमसँगै विभिन्न प्राविधिक समस्याहरु देखा पर्दै आएकोले...
‘मेरो सेयर’ चलेन, सीडीएससी समस्या समाधान गर्न प्रयासरत
काठमाण्डौ । सीडीएससीको ‘मेरो सेयर’ पोर्टलमा आज फेरि प्राविधिक समस्या देखिएको छ। जसका कारण मेरो सेयर खुल्न सकिरहेको छैन। सीडीएससीका अनुसार मेरो सेयरमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि खुल्न नसकेको हो। बिहान ११ बजेदेखि नै मेरो सेयर खुलेको छैन। मेरो सेयर नखुल्दा लगानीकर्ता मारमा परेका छन्। पटकपटक मेरो सेयरमा समस्या आउँदा झन्झट...
सिडिएससीको पूँजी बढाउने तयारी, प्रिमियममा सेयर बिक्री गरिने
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेड(नेप्से)को सहायक कम्पनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडमा संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने प्रयास थालिएको छ । हाल सिडिएससीको चुक्तापूँजी ३० करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यति थोरै पूँजी भएको कम्पनीले अर्बौको कारोबार सम्हालिरहेको छ । जोखिमका हिसाबले पनि अत्यन्त कम पूँजी भएको निश्कर्षसहित...
‘मेरो सेयर’ खुलेन, सीडीएससी भन्छ, ‘प्राविधि समस्या देखियो’
काठमाण्डौ । सीडीएससीको ‘मेरो सेयर’ पोर्टलमा आज सोमबार समस्या देखिएका कारण चलेको छैन। मेरो सेयरमा समस्या आउँदा सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको सेयर भर्न लगानीकर्ताहरु पाइरहेका छैनन्। यो कम्पनीको आईपीओमा भोलि चैत १० गतेसम्म आवेदन दिन पाइन्छ। सीडीएससी प्राविधिक समस्या आएको भन्दै मेरो सेयर पोर्टल बन्द गरेको हो। सीडीएससीका एक...
लगानीकर्ताको रु. १८.३२ करोड ब्रोकरद्वारा झ्वाम, क्लोजआउटको नाममा लूट–धन्दा
-अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । लगानीकर्ता सचेत नहुँदा क्लोजआउटका नाममा उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा जरीवानाबापत तिरेको १८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम ब्रोकरहरुले झ्वाम पारेका गुनासो आएको छ । कारोबार भएको सेयरको समयमै राफसाफ नहुँदा क्लोजआउटको नाममा लगानीकर्ताले तिरेको १८ करोड ३२ लाख १७ हजार ९९० रुपैयाँको हिसाबकिताब गोलमाल...
मेरो सेयर र डिम्याट नवीकरणमा यस्ता छन् थप सुविधा
काठमाण्डौ । अब मेरो सेयर र डिम्याट अकाउन्ट नवीकरण गर्नका लागि अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायकहरु थप गरिएका छन्। हाल मेरो सेयर पोर्टलबाट एउटामात्रै ई–सेवामार्फत मेरो सेयर र डिम्याट अकाउन्ट नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। अब मेरो सेयर पोर्टलबाट कनेक्ट आईपीएस, खल्ती, आईएमई पेस र प्रभु पेमार्फत पनि मेरो सेयर र डिम्याट अकाउन्ट...